Ikhabhathi yesiNtu yokuLoga kwiChibi - I-Airbnb
Ikhabhathi yesiNtu yokuLoga kwiChibi
Ifama sinombuki zindwendwe onguFern
Ikhabhathi yelog yabucala epholileyo echibini, ejikelezwe ngamaphandle amahle. Uxolo oluthandekayo suka kuyo yonke indawo kwindawo yobuhle bendalo obubalaseleyo, kodwa yimizuzu nje elishumi uhamba ukusuka eRoyal Tunbridge Wells, nayo yonke inkcubeko, imivalo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. Ilali entle yaseLamberhurst inee-pubs ezininzi ezinokubonelela, ngokutya okukumgangatho ophezulu kunye nee-ales zasekhaya. Oololiwe abaya eLondon bayiyure enye ukusuka kwisikhululo saseFrant. Izinto ezikufutshane zibandakanya iScotney Castle, iBewl Water kunye neBedgebury Pinetum.
Imi kwifama yethu yemfuyo esebenzayo, indlwana yeeplanga inendawo yayo yokungena efama enendawo eninzi yokupaka. Akukho zixhobo ekwabelwana ngazo kwaye wamkelekile ukuba uze kwaye uhambe ngokuthanda kwakho. Ikhabhathi yelog yindawo ezolileyo kakhulu enoxolo kunye nathi kuphela kubamelwane abakufutshane. Kukho indawo ethandekayo yabucala ehonjisiweyo ejonge echibini ukuze uyisebenzise kuphela. Indawo yokuhombisa ijonge emazantsi kunye nomgibe welanga wokwenyani, hlala phantsi, uphumle kwaye wonwabele iimbono zechibi kwaye ubukele ukuphithizela kwezilwanyana zasendle ngaphandle. Umhlaba omhle wemithi ojikeleze ikhabhinethi uthetha ukuba lonke ixesha lonyaka likhethekile apha kwaye libonelela ngembono ehlala iguquka, ukusuka kwimibala eqaqambileyo yasekwindla ukuya kuthi ga ekuqaleni kwentwasahlobo, izisa intaphane yeentsimbi eziluhlaza emahlathini kwaye ihlobo apha ngokuqinisekileyo lineyona nto ibalulekileyo. Lindela ukubona izilwanyana zasendle ezininzi apha, kuquka iintlobo ngeentlobo zamaxhama azula-zula ngeenxa zonke kwaye sikwanaye nomhlali we-kingfisher echibini. Indawo yokungena kwikhabhathi yelog inecanopy egqunyiweyo ukuze ukwazi ukonwabela ngaphandle nakwimozulu embi. Kukho indawo yokuhlala eninzi ngaphandle kwaye i-BBQ iyafumaneka ukuze isetyenziswe ngexesha leenyanga ezishushu. Kukwakho nokukhanya okuninzi kwangaphandle, kubandakanya isibane esishukumayo sesikhukula apho uya kupaka khona. Ukuba kwaye xa wonele ngokuthatha iimbono zethu ngaphandle, faka ingaphakathi elifudumeleyo nelipholileyo lekhabhathi yethu ethandekayo yelog. Indawo yokuhlala inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, elinefriji edibeneyo kunye negumbi elincinci lokukhenkceza ngaphakathi kwefriji. Kukho isitovu sombane, imicrowave, iketile, itoaster kunye nomatshini weNespresso. Ndiza kukunika iti, ikofu njl njl kunye nobisi ukuze uhlale. Kukho ibhedi ye-kingsize enomandlalo oqinileyo kunye noluhlu lweedrowa kunye ne-ottoman yokugcina iimpahla zakho kunye nezinto zakho. Umzila kaloliwe ojingayo ovulekileyo osisigxina, ozaliswe ngama-hangers usetyenziselwa wena. Isofa enkulu ekhululekileyo enezihlalo ezibini kunye netafile yokutyela enezihlalo ezibini kunye nezitulo zigqibezela isicwangciso esivulekileyo sokuziva kwindawo ephambili yeloji. Kukho umabonakude owakhiwe kwi-DVD player exhonywe kwisibiyeli seTV esishukumayo esigcweleyo ukuze ube lula ukubukela. Kukho igumbi lokuhlambela elahlukileyo, elinetreyi enkulu yeshawari kunye nethawula eshushu. Iitawuli zinikezelwa. Kukho igumbi lokuhlambela elahlukileyo, elibandakanya iWC kunye nendawo yokusheva. Indawo yokulala inamanzi ashushu kunye nezifudumezi, kuquka isitovu sombane esibaswa ngamaplanga. Ukutshaya akuvumelekanga kwindawo yokulala. Ichibi alivulekanga kuluntu kwaye lenzelwe ukonwaba kwethu kunye nolonwabo lweendwendwe zethu, ukuloba iindwendwe zethu kuvunyelwe, nceda ubuze ngaphambi kokubhukisha, ukuze ndikunike lonke ulwazi oludingayo malunga nechibi.
5.0 · Izimvo eziyi-228
Ilali yaseLamberhurst yindawo entle kakhulu yasemaphandleni enobutyebi belizwe, ibonelela zonke iimfuno zakho. Kukho ivenkile eluncedo eneenkonzo zeposi kunye namagumbi eti abekwe kumbindi welali. Intlanzi ehambayo kunye neveni yetshiphu indwendwela ilali ngokuhlwa kwangoLwesine. Kukho izinto ezininzi ezinomtsalane kunye neendawo zokundwendwela ngaphakathi nakwindawo ezingqongileyo kubandakanya:
Scotney Castle, Leeds Castle, The Pantiles, Bewl Water, Bedgebury Pinetum, Lamberhurst Vineyard, Penshurst Place, The Hop Farm, Spa Valley Railway, Theatre Hall Holo.
Iidolophu ezikufutshane namaxabiso yiRye kunye neHastings, malunga nemizuzu engama-40 ukubaleka.
Sinazo zonke iivenkile ezinkulu zamagama, ubukhulu becala ngaphakathi kwemizuzu elishumi yokuqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Fern
Ekufikeni kwam efama, ndiya kufumaneka ukuze ndidibane nawe, ndikunike izitshixo kwaye ndiphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Siza kukushiya ukonwabele ukuhlala kwakho ngasese, kodwa silapha efama ukuba uyasifuna. Ukungeniswa kade kunokufumaneka, nceda uqhagamshelane nam ngaphambi kokufika. Express check out iyafumaneka.
Ekufikeni kwam efama, ndiya kufumaneka ukuze ndidibane nawe, ndikunike izitshixo kwaye ndiphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Siza kukushiya ukonwabele ukuhlala kwakho ngase…